काठमाडौ : पछिल्लो समय मा सा’माजिक सं’जाल मा निकै नै च’र्चा कमाएका सचिन प`रिवार को आमा पहिलो पटक मि|डिया मा आएकी छिन्।
सचिन को बुबा ले घरमा एउटी श्रीमती हुदा`हुदै अर्को ल्या’एका हुन् भनि संचिन कि आमाले भनेकी छिन्।
अहिले भने आफ्नो छोरा सचिन लाई खो’ज्दै सचिन को आमा मि’डिया सामु आएकी छिन्। सचिन आमा`को का’ख
बाट अ’लग भएको ७/८ महिना भएको रहेछ। आमा मिडिया मा आए ल’गत्तै सचिन को बा’ल्यकाल को पुरानो भिडि`यो सा’र्बजनिक भएको। बुबा तेजेन्द्र आमा सरिता को साथ मा हुदा धेरै सुन्दर , खुशी थिए सचिन , ढुंगा गिट्टी कु’टेर भए पनि सचिन लाई प’ढाईरहेकी थिइन्।
सचिन लाई हु’र्काईन बढाईन ठुलो बनाईन , तेजेन्द्र ले दो|स्रो बि’बाह गरे पछि सन्तान संग अ’लग बस्नु पर्यो। दुई बर्ष सम्म श्रीमान को मा’या र स’न्तान पाउछु कि भनि दुई बर्ष
सम्म कु’रिन दुवै केहि नपाए पछि सचि`नकि आमा स|रिता ले दोस्रो बि’बाह गरेकी हुन्। पहिलो श्रीमा`न बाट माया नपाएर दो’स्रो बि’बाह गरेकी सरि`ता लाई अहिले पनि भ’गवान ले ठ’गे , दोस्रो बि`बाह बाट पनि राम्रो हुन् सकेन।
यति बेला सचिन भा`इरल भईरहदा सचिन को क’माई खान आमा अहिले मि|डिया मा भा’इरल भएको भन्ने हरुको लागि यस भिडियो बाट पनि सचिन लाई आमाले पहिले देखि नै प्र`यास गरेको देख्न सकिन्छ। अब प्रस्तुत छ ।
भिडियो सामाग्री !
२०७८ जेष्ठ २९, शनिबार २०:५१ गते0Minutes 838 Views
दुबई पुलिसमा जान लाग्दा कोरोनाले रोक्यो, त्यसपछि सुरुगरेको ‘चिकन चटपट’बाट मालामाल !
रेखा थापाले गरिन बिबाह ! को हुन नया पति ?
साउदीमा मृ’त्यु भएको छोराको क्रि-यामा बसेका एक अभागी बाबु !